Anyị nwalere elekere TomTom Runner Cardio | Akụkọ akụrụngwa
Anyị ekwuolarị otú ibudata ma melite free TomTom maapụ si Iberia taa anyị ga-eju gị anya ọzọ. Smartwatches na-agbaso otu ụzọ a na-etinye site na smartphones, ya bụ, ịmepụta ngwaọrụ nwere ike ịme ọtụtụ ihe n'agbanyeghị na ha nwere obere ma ọ bụ ihe ọ bụla metụtara ịgwa oge ahụ. N’echiche a, njem nke elekere amamịghe ka malitere na nzọ dịka nke enyere site na TomTom Runner Cardio ha na-arụ ọrụ nke ọma karị n'ime egwuregwu.
A smartwatch ga-agwa anyị usoro, calorie ọkụ, njem dị anya ma ọ bụ ọ nwere ike inye anyị mkparịta ụka mana mana, ọ ka dị anya site na ihe onye na-eme egwuregwu na-azụ kwa ụbọchị na-achọ na Egwuregwu elekere.
1 TomTom Runner Cardio, ihe ngosi izizi
2 Ezubere iji nwee ọ runningụ n'ịgba ọsọ
TomTom Runner Cardio, ihe ngosi izizi
Ozugbo anyị wepụrụ TomTom Runner Cardio n'ime igbe ya, anyị ghọtara na anyị na-echekwa nche elekere n'ụba nke eriri ya, nke ejiri rọba dị mma na-agbanwe agbanwe, na-enye ohere ọtụtụ mgbanwe site na ya Mmachi nkechi ato ato. Nke a ga - agba mbọ hụ na elekere ahụ na - emegharị ka ọ na - esokarị nkwojiaka, na nke kachasị, ọ nweghị ohere ọ nwere ike ịda na mberede mgbe ị na - egwu egwuregwu (ihe na - eme na ihe karịrị otu ụdị mgbaaka ọrụ na ahịa).
Banyere aru nke nche, enwere uzo abuo nke oma di n'ihu. N'otu aka, anyị nwere ihuenyo millimita 22 x 25 na mkpebi nke 144 x 168 pikselụ na nke ọzọ, a ụzọ anọ na mpe mpe akwa na anyị ga-eji na-agafe menu.
Abụ m otu n'ime ndị na-eche na oge ị malitere ịme egwuregwu na ntinye aka na mkpa, nzaghachi nke bọtịnụ na-ezu karịa nke mmetụ aka, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-ejikarị aka. Ya mere, ihe ngwọta site Nke ahụ TomTom na-akụ nzọ dị m ka ọ kacha nwee ọganiihu.
Ihuenyo zuru oke n'okpuru ọnọdụ ọ bụla, ọbụlagodi na ìhè anyanwụ kpọmkwem, ndị na-eme egwuregwu n'èzí agaghị emechu ihu na nke a.
N'oge a, n'ezie ọtụtụ n'ime gị na-eche ma TomTom Runner Cardio bụ submersible mmiri Ma n'ezie, ọ bụ. Enwere ike igba mmiri elekere ruo mita 50 ka anyị wee jiri ya saa ya ma ọ bụ saa ahụ n'ọdọ mmiri na-atụghị ụjọ mmebi. O di nwute, emebere TomTom Runner Cardio dika nche maka ndi choro igba oso ma n’èzí ma n’ulo, ya mere ime ihe n’egwuregwu ndi ozo bu ihe enweghi oke site na enweghi ntinye aka nke omume dika igwu mmiri, igba ugbo, wdg.
Ọ bụrụ na anyị agbanye TomTom Runner Cardio gburugburu, nke ahụ bụ mgbe anyị nwere ike ịhụ na elekere ahụ nwere ihe nyocha anya na, site na iji otu ụzọ ọkụ, nwere ike ịchọpụta mgbanwe na ike nke akpụkpọ anyị, site n'ebe ahụ, nyochaa anyị obi obi. Na ihe nlele ọ dị ọsọ ọsọ ma zie ezi, dị mkpa maka ọzụzụ dị mma dabere na mpaghara ọnụọgụ obi ise.
N'ikpeazụ, rịba ama na batrị nke TomTom Runner Cardio na-ejide ruo awa 8 ọ bụrụ na anyị ejiri njikọta GPS na nyocha ọnụọgụ obi n'otu oge. Mgbe batrị na-agwụ, anyị ga-ejikọrịrị elekere na isi ya na njikọ USB yana ọ bụ ya.
Ezubere iji nwee ọ runningụ n'ịgba ọsọ
TomTom Runner Cardio nwere GPS ịzọpụta ma ọ bụ ibu ụzọ gasị, nyochaa obi ọnụego, njikọta Bluetooth, ịdọ aka na ntị na ohere nke ịmekọrịta na ọrụ ntanetị nke TomTom, na-enye anyị ohere ijikwa mgbatị anyị kpamkpam.
Ihe niile akpọtụrụ n’elu, nche a na-enye ihe niile ịchọrọ maka ndị na - apụ apụ gbaa ọsọ ma ọ bụ jee ije na ha chọrọ kacha zuru ezu ngwaọrụ kwere omume.
N'ihi njikọ nke ngwaike na ngwanrọ TomTom, anyị nwere ike ịmalite mgbatị na-eme mgbatị (anya, oge, ijeụkwụ, calorie ọkụ) ma ọ bụ na mpaghara ike ise ahụ dabere na mmegharị anyị. Anyị nwekwara ike ịkwado ọzụzụ ọzụzụ gara aga ma gbalịa imezi oge anyị gara aga, ihe kachasị asọmpi ga-amasị.
Dị ka anyị kwurula, n'ihi ụzọ ihe anọ anyị nwere ike setịpụrụ ụdị ọzụzụ anyị chọrọ ime nke a na obere oge, anyị nwere ike ịmalite data data ozugbo elekere ahụla mkpuchi GPS, ihe na-anaghị ewekarị karịa nkeji ole na ole n'èzí.
N'otu oge, n'ụlọ, anyị nwere ike ibudata data anakọtara ma jiri ikpo okwu TomTom MySports maka ịbịaru nso.
Ekwela ka eduhie gị site na ohere nke smartwatch iji mee egwuregwu ma tinye na ngwọta dị ka nke anyị na TomTom Runner Cardio.
Ọtụtụ smartwatches ugbu a enweghị ihuenyo nwere ike ịgụ ya n'èzí, anaghị abịa nyochaa obi ma ọ bụ na mmiri anaghị egbochi ya. Ghara ikwu banyere enweghị GPS n'ọtụtụ oge ma ọ bụ enweghị ezigbo usoro egwuregwu nke ị ga-enweta ihe ndekọ zuru ezu banyere usoro ọzụzụ anyị.
O nwere ike ịbụ na n'ọdịnihu, emezighị emezi niile ndị a nke elekere smart smart ugbu a ga-ebelata mana ka ọ dị ugbu a, TomTom Runner Cardio dị ugbu a maka ọnụahịa nke 269 euro.
Njikọ - TomTom Runner Cardio
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Anyị nwalere elekere TomTom Runner Cardio